Ahoana no mahalala tsara ao Alemaina: ny zavatra niainako manokana-Ny manokana any Alemaina - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT-Fitiavana online!
Ahoana no mahalala tsara ao Alemaina: ny zavatra niainako manokana-Ny manokana any Alemaina
Ny fomba mba hifandray ny interlocutor
Jan Dissuader, ny mpifindra monina avy any Alemaina, dia nilaza tamiko fa misy tsy voalaza fitsipika rehefa mihaona sy mifampiresaka ao Alemaina
Tsara, ity tantara ity dia ho ilaina, satria ny tapany voalohany tokony hampifandray ny andian ny fivoriana.
Ny fomba hamaliana ny nentim-paharazana ny fanontaniana hoe"Miarahaba, manao ahoana ianao? Jan foana manoro hevitra anao mba ho fohy ary tsy anjara rehetra ny tsipiriany manokana ny fiainana ho an'ny olona tsy dia miresaka."Tsy ilaina ny mba mandinika izany olana izany araka ny ny fepetra mba hiresaka amin'ny antsipiriany momba ny zavatra tena ataony, ary, ambonin'izany rehetra izany, mba hilaza ny momba ny olana.
Na raha toa ianao ka raha mihaino, dia ho vokany ratsy eo amin'ny mpanao fanadihadiana.
Any Alemaina, dia tsy fanao ny"alefaso"na dia akaiky ireo, dia aoka irery ny namana sy ny olom-pantany. Tandremo ary henoy ny fomba izy, na dia manolotra ny tenany na ny tenany. Fa marina inona izany, ary mendrika ny fiantsoana hoe:"Raha, rehefa misy fihaonana toa tahaka tanteraka ny resaka mpiara-miasa, ohatra (amin'ny heviny ny fampiroboroboana) na dia nihevitra fa ny adiresy mandeha ho azy izany tovona mialoha ny anarany: na". Ny Alemana no tena sarobidy."Inona no mba hiresaka momba ny tany iray tsy fantatra ny fiaraha-monina. Mianatra ny fahaiza-tsotra ny resaka, toy ny Amerikana antso izany."Tsara ny lohahevitra ny adihevitra ao amin'ny orinasa ireo ny toetr'andro, ny kolontsaina, ny fety, ny fanatanjahan-tena."Efa saika tsy naheno ny politika, ny aretina, na olona hafa ao amin'ny fiainantsika manokana. Eny ary, any Alemaina tsy mahazatra mba hiresaka momba ny foto-kevitra ny vola rehetra.
Izany dia heverina ho toy ny fanafihana ny fiainana manokana sy ny mety ho ratsy ny vokany."Inona no atao raha toa ka tsy mahatakatra na diso fandray ny olona hafa? Izany ihany koa ny manana ny tsy voasoratra fitsipika: Tsy maintsy hanontany indray, ary tsy maintsy tsy tony kosa ny manodidina."Raha toa ianao ka nangataka zavatra fa ny teny alemana dia tsy tsara ary tsy azonao inona izany, manoro hevitra anao aho mba tsy hiala amim-pahanginana, afa-tsy ny milaza fa tsy mahatakatra ny olana.
Fehezan-teny dia tokony ho anisan'ny Ny teny Fantany sy tokony matetika manampy ny mametraka fifandraisana.".
ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana ny tovovavy ho an'ny Fiarahana lahatsary sary tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat Chatroulette ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny tovovavy taona amin'ny chat roulette amin'ny ankizivavy maimaim-poana ny fiarahana Chatroulette fifandraisana amin'ny chat roulette fisoratana anarana video Fiarahana tamin'ny tovovavy iray maimaim-poana tena matotra ny Fiarahana